Voadika ny 05 Novambra 2018 3:17 GMT
Swobodin manoratra fa nahoana ny Tetikasa Gutenberg no manana boky maherin'ny 10.000 ara-dalàna izay azo trohana amin'ny fiteny 50, kanefa tsy misy amin'ny teny Arabo. Manohy miresaka momba ny tsy fisian'ny boky amin'ny teny Arabo amin'ny endrika elektronika izy, sy momba ireo tranombokim-pirenena sy foibe ara-kolotsaina tsy manao ny asany amin'ny fampiroboroboana ny literatiora sy ny kolontsaina Arabo.
Manoratra mikasika ny foaran'ny boky iraisam-pirenena natao tao Tonizia sy ny fahadisoam-panantenany taorian'ny fitsidihany izany izy. Bokim-pivavahana mitovy ihany no hitany isan-taona ao amin'ny ankamaroan'ireo toerana fampiratiana miaraka amin'ny loko sy fonony isan-karazany, dia ireo boky nadika momba ny Yoga, ny Makrobiotika sy ny fanampiana tena, ireo boky Arabo tranainy nosoratan'ireo mpanoratra Arabo fahiny, ireo boky ara-politika ampahany miresaka momba ireo olana taloha na lazaina fa “mafana”, saingy lohahevitra tsy lehibe. Vitsy monja ireo boky mahaliana na manan-danja hita eo amin'ireo antontam-boky rehetra. Manazava ihany koa izy fa sarotra ny mahita ireo boky Arabo vaovao nosoratan'ireo mpanoratra Arabo vaovao. Miresaka antontan'isa mikasika ireo boky sy votoaty amin'ny teny Arabo eto amin'izao tontolo izao izy avy eo, ary ny tsy fisian'ny fanohanana mihitsy ho an'ireo mpanoratra vaovao ao amin'ny tontolo Arabo.
Heliodore manoratra momba ny fanatrehana ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'i Paulo Coelho tao amin'ny foaran'ny boky iraisampirenena ao Tonizia ary namoaka sary maromaro nalainy tamin'izany.
Adib indray manoratra momba ny fomba nihaonany tamin'i Paulo tao amin'ny foara andro vitsy taty aoriana, tena mahafinaritra izy miresaka amin'ny olona, ​​ary mahatsiaro ny bokin'i Coelho “The Alchemist” nandray anjara andraikitra lehibe teo amin'ny fiainany.
Zizou, rehefa avy namaky lahatsoratra an-gazety momba ny adihevitra sasany teo amin'ny parlemantera mikasika ny fiarovana ny kolontsaina sy ny soatoavina Toniziana ary tetikasa iray hampiasa vola 3 tapitrisa dinara ho fanavaozana ny trano fijerena sinemà, dia manontany tena izy hoe tena azo tanterahina ve ny resak'izy ireo sy ny drafitr'izy ireo, ary tena miatrika ireo olana tena misy sy mitady vahaolana marina ve izy ireo.
Swifty mamoaka lahatsoratra mahafinaritra mikasika ny lafiny siantifika amin'ny finoana silamo sy ireo tranga ara-tsiansa samihafa izay efa nohazavain'ny Korany Masina amin'ny antsipirihany 1400 taona mahery lasa izay. Namoaka lisitra nofantenana misy ny sasany amin'ireo zava-misy ireo sy ireo andininy ao amin'ny Korany manazava izany izy.
Princess, tamin'ny fankalazana ny Fetiben'ny Boky Iraisampirenena natao tao anatin'izay andro vitsy izay kosa manoratra momba ny olana amin'ny tsy fisian'ny kolontsaina mamaky boky any Tonizia. Miresaka momba ireo olona izay miseho ho manam-pahaizana nefa tsy mba mamaky boky izy, ary koa ireo olona milaza fa tsy manam-potoana hamakiana boky amin'ny asa andavanandron'izy ireo “mahafinaritra” toy ny mandeha any amin'ny klioba na fisotroana kafe, ary ireo mpianatra izay zara raha mamaky ny boky fianarana sy bokin'oniversite.
Soufi manome fomba fijery fohy momba ny Andron'ny Sinemà Eoropeana ao Tunis, manonona ny fotoana na ny antsipiriany tsy hay hadinoina, ary koa ireo sarimihetsika sy seho ankafiziny indrindra.
Zaratoustra manoratra momba ny fomba vaovao hahazoana visa Frantsay izay mitaky amin'ny olona mba hanome ny lavotondron'izy ireo ary manontany tena hoe rahoviana izy ireo no hotakiana santionana ADN ihany koa, avy eo mamazivazy fa afaka dimy taona, dia mety hanomboka hangataka amin'ny olona izy ireo mba hametraka braselé misy baomba manodidina ny tenda izay hipoaka rehefa tapitra ny fe-potoanan'ny visan'izy ireo kanefa mbola any Frantsa izy ireo (Frantsay).